शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिँदा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान, लिने हैन ?  BikashNews
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण लिँदा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान, लिने हैन ?
२०७५ असार २७ गते १८:०५ विकासन्युज
काठमाडौं । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा दिने कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको बजेटमा उद्यमशिलताको विकास गर्नका लागि शिक्षित युवालाई उसको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर कर्जा दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । सोही व्यवस्थालाई कार्यन्वयन गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको हो ।
सरकारले ऋणीको व्यवसायको बीमा गर्ने, ऋणको संरक्षण गर्ने र ब्याज अनुदान दिने योजना बनाएको हो । शैक्षिक कर्जा, प्रमाणपत्र धितो राखेर पाइने कर्जा, विदेशबाट फर्केर आएकाहरुलाई उद्यमशिल बनाउन उपलब्ध गराइने कर्जाहरुको कार्य्विधि बनिरहेको छ ।
बैंकबाट १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्ने र ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर बाख्रा पाल्नेहरुका बिचको प्रतिष्पर्धा हुनेछ । यसले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर लिने ऋणलाई प्रतिष्पर्धामा सहज हुनेछ । ऋणको संरक्षण र बीमा र ब्याज अनुदान सरकारले दिने हो । डिग्री पास गरेका कमजोर आर्थिक अवस्था भएका युवाहरुले मात्रै त्यस्तो ऋण पाउने छन् ।